पेट्रोलियम पाईपलाईनको उद्घाटन ओलिले नेपालबाट, मोदिले दिल्लिबाट – On Khabar
Banner News गृहपृष्ठ प्रमुख समाचार प्रवास राजनीति समाचार
September 9, 2019 onkhabarComment(0)
भदौ, २३ । भारतको मोतिहारीदेखि बाराको अमलेखगञ्जसम्म बनेको पेट्रोलियम पाइपलाइन मंगलबार उद्घाटन हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एक साथ पाइपलाइनको उद्घाटन गर्नेछन् । दुबै देशका प्रधानमन्त्रीले एकैसाथ स्वीच थिचेर उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
मोदीले आफनो निवासबाट बटन थिच्नेछन् भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफनो निवासबाट बटन थिचेर उद्घाटन गर्नेछन् । उद्घाटनसंगै मंगलबारबाट पाइपलाइनबाट नियमित तेल आउँनेछ । पेट्रोलियम पाइपलाइनलको क्षमता दैनिक २० घण्टासम्म संचालन हुन सक्नेछ। पाइपलाइनबाट दैनिक रूपमा ३० हजार किलोलिटर तेल आउँनेछ ।
पाइपलाइनबाट आएको तेल सुरुमा काठमाडौं, पोखरा र अमलेखञ्जमा पठाईनेछ । पाइपलाइनबाट तेल भित्रिँदा वार्षिक ७० देखि ८० करोड बचत हुने र तेल चोरी पनि कम हुने विश्वास निगमले लिएको छ । पाइपलाइनबाट नियमित डिजल आउने भए पनि पेट्रोल आउन भने अझै करिब १ वर्ष लाग्ने निगमले जनाएको छ ।
नेकपाका उपत्यका इन्चार्ज माईला लामा मध्यरातमा गिरफ्तार
July 21, 2019 onkhabar
अनखबर / साउन ५ जनवादी कलाकार एबम बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रिय सदस्य तथा उपत्यका ब्युरो इन्चार्ज माइला लामालाई प्रहरीले शनिबार मध्ये राती भक्तपुरबाट गिरफ्तार प्रयास गरेको छ। काँडाघारीस्थित एक घरमा बसिरहेका बेला ठुलो संख्यामा पुगेका प्रहरीहरुले घेरा हालेर खान तलासी गरेका थिए। प्रहरीको घेराबांदीमा परेको भनिएका नेता लामा अहिले सम्पर्क बिहिन भएका छन्। […]
‘विप्लव’ निकट विद्यार्थीका अध्यक्ष चिरञ्जीवी ढकाल रिहा, अदालत हाताभित्र प्रहरिसग यसरी लडे कानुनविदहरु
May 17, 2019 May 17, 2019 onkhabar
अनखबर/ जेष्ठ ३ । अखिल (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष तथा कानुन व्यावसायी चिरन्जीवी ढकाल रिहा भएका छन् । गत वैशाख २७ गते शुक्रवार ११ बिद्यार्थी संगठनको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनबाट गिरफ्तार अध्यक्ष ढकाल रिहा भएका हुन् । आज शुक्रवार काठमाडौ जिल्ला अदालतले थुनछेकको बहसपछि ढकाललाई साधारण तारेखमा रिहा गरेको हो । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मोहनराज भट्टराईको इजलासले […]
हेर्नुस कानुनी राज्य : रेशम चौधरी पछि दीपक मनाङेको सपथको तयारी
January 6, 2019 January 6, 2019 onkhabar
अनखबर पौष २२, काठमाडौं गण्डकीको प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित राजीव गुरूङ ‘दीपक मनाङे‘ लाई सपथ खुवाउनेबारे आइतबार छलफल हुने भएको छ। गण्डकीका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले मनाङेको सपथबारे छलफल गर्न आइतबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक डाकेका छन्। ‘उहाँको सपथबारे माननीयज्यूहरूका फरक फरक धारणा छन्, आजको बैठकले जे निर्णय गर्छ त्यहीअनुसार हुन्छ,’ सभामुख अधिकारीले भने। उनले मनाङेलाई […]
प्रवासी नेपालीको “तिज महोत्सव” सम्पन्न, ईतिहासमै धेरै दर्शकले गरे अबलोकन
विप्लवको ताजा अन्तर्वार्ता (भिडियो) : जेलभित्रको मोर्चा सम्हाल्न कार्यकर्तालाई अपिल !
प्रवासी नेपालीको “तिज महोत्सव”को तयारी पूरा, कलाकार दिल्लिमा
एनसेलप्रती विप्लव नेकपा आक्रमक : एनसेललाई नेपालबाट निष्काशन !
प्रवासी नेपालीको “तिज महाधमका” न्यु दिल्लिमा हुने